José Javier Abasolo. Kubvunzana nemunyori weVhezheni yekutanga | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 14/09/2021 12:00 | Hurukuro, Vanyori, Mabhuku
Mufananidzo: José Javier Abasolo. Facebook nhoroondo.
Jose Javier Abasolo (Bilbao, 1957) ine nyowani nyowani pamusika, Shanduro yekutanga, kwaanodzokera kuhunhu hwake Mikel Goikoetxea mune imwe kesi nyowani nenyika ye cinema kumashure. Ndiyo yazvino muunganidzwa wakanaka wemazita emhando dema kumashure kwake senge Chiedza Chakafa, Whitechapel Oath kana Tomb muJerusarema, pakati pevakawanda. Ini ndinotenda chaizvo nguva yako uye mutsa mukundipa izvi indavhiyu.
José Javier Abasolo - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Shanduro yekutanga ndiyo nyaya yako nyowani. Chii chaunotiudza nezvazvo uye Mikel Goikoetxea ari kuita sei semutikitivha wega?
JOSÉ JAVIER ABASOLO: Iyo novel inotanga riini Goiko anoshandirwa nekambani inogadzira kuve chipangamazano a firimu izvo zviri kutorwa pane vamwe mhosva dzakaitika muBilbao Makumi makumi maviri apfuura, zvakanzi nemuchina "mhosva dzemuchinjikwa."
Mukutaura, ndizvo asingatauri kubvuma kupihwa, nekuti ndiyo kesi chete iyo yaisakwanisa kugadziriswa paakanga ari Ertzaina, asi kune rimwe divi anofunga kuti zvinogona kunge zviri a mukana wekuvhurazve akaviga kuferefetwa kwehumwe humhondi hunoramba huchimutambudza. Kunyangwe paanoziva kuti fanano pakati pezvakaitika nefirimu (iyo pachinzvimbo chaBilbao yakaiswa mudunhu rakarasika muAlabama, USA) iri kure kwazvo, haavanze kutsamwa kwake.
Semutikitivha Goiko ari kuita nemazvo, nekuti anofarira kutamba nemitemo yake uye haana kurangwa, asi dzimwe nguva anorasikirwa nenzvimbo dzekushanda sechikwata dzinogona kumupa uye nedzimwe nzira dzakawanda kupfuura dzaanenge ari oga.
JJA: Ndinoyeuka muunganidzwa wakashandura chaiwo mabhuku ezvinyorwa evana, uye mairi ndakakwanisa kuverenga El Lazarillo de Tormes, El Cantar de Mío Cid, Don Quixote naCorazónrakanyorwa naEdmundo de Amicis. Pandakaziva pandakanga ndakura kuti iyo yekupedzisira yakaverengerwa muChechi Index yeVakarambidzwa Mabhuku, ini handina kuzvitenda.
Pamusoro pechinhu chekutanga chandakanyora-kana, pane kudaro, icho chandakaedza kunyora-, ndinofunga ndizvo kuyedza pane picaresque inoverengeka yakaendeswa kune iyo XNUMXth century (Tichaitei, ini ndiri wezana ramakore rapfuura), asi handizvichengete. Sezvineiwo.
JJA: Zvakaoma kupindura, nekuti zvinogona zvakare kuchinja zvichienderana nezuva kana manzwiro angu. Asi seanofarira zverudzi rwevatema, ndinogara ndichiverenga zvekare ma greats senge Raymond Chandler kana Dashiell Hammett. Ndinoziva zvinoita senge hombe musoro wenyaya, asi ini ndinofunga kuti mune ino inyaya yakanyatsosimba.
Kunze kwerudzi rwevatema, Pio Baroja. Uye ndakanyatsonakidzwa nekuseka kwe Wodhouse and of Jardiel Poncela.
JJA: Sezvandareva pakupindura mubvunzo wapfuura, zvinonetsa kupindura, nekuti zvichienderana nezvandiri kuverenga kana manzwiro angu, ndinogona kuchinja kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, asi pamwe ndingadai ndaifarira kusangana nem protagonist werino raPío Baroja , Zalacaín mushanyi.
Kana ari mavara api andingadai ndaida kugadzira, Ndino gadzirisana neavo vandakatogadzira. Kwete nekuti ivo vari nani kana vanonakidza kupfuura vamwe, asi nekuti ivo chikamu changu.
JJA: Hapana kunyanya, kunyangwe sezvo ivo vakandiudza kuti kuva nemamanaas pakunyora kunonzwika "kunyorwa chaizvo", ini ndinowanzo taura izvozvo Ndine mania yekushaya manias.
JJA: Ndisati ndanyora kazhinji masikati nemanheru, asi sezvo ndaenda pamudyandigere Handina zvandinoda, chero nguva zvinogona kunge zvakanaka. Ehe, ini ndinoedza kuwana imwe nguva yekuzviita mazuva ese. Uye sezvo ini ndisingade kuzviparadzanisa, kana kuzvimisira hofisi mumba mangu ndega, Ini ndinowanzoendesa laptop yangu kuimba yekutandarira. Vana vangu vachiri vadiki ndakazojaira kunyora pakati peruzha rwavaiita pavaitamba ndikachinjira kwarwo pasina matambudziko. Iye zvino ini ndinotozvirasa panguva yekunyora.
JJA: Ini handifunge kuti pane akanaka kana akaipa marudzi, asi akanaka kana akaipa enganonyorwa, zvisinei nemhando iyo yavanogona kupihwa, asi sezvo ini ndisingafarire kunyorova ndinofanira kubvuma kuti ndine kushaya simba kwesainzi fungidziro (Ini ndagara ndiri Asimovian chaizvo) uye kwaari nhoroondo yemhandoAsi kwete kune uyo anotaura nezvemadzimambo makuru nemauto, asi kune uyo anotarisa zvakanyanya kune "vanotambura" venhoroondo.
JJA: En ChiBasque Ndiri kuverenga zvekare Greta, ivo Jason osoro, inhau inonakidza kwazvo yandinofunga haina kushandurirwa muchiCastilian, zvinosuruvarisa. Uye mukati Castilian Ndatanga kuverenga Usiku kutizanaThomas Chastain, iyo yandakawana yekupedzisira Nhema Svondo muGijon. Iyo inoverengeka nemunyori yandaisaziva uye iyo yakaburitswa muJúcar muunganidzwa muBlack Label muunganidzwa, iyo inogadzira kuvimba mandiri.
Kana zviri zvekunyora, kupfuura kunyora ini ndiri kutora zvinyorwa zvenyaya yandinoda kuisa muBilbao, panguva yeHondo Yenyika, mazuva mashoma mauto aFranco asati atora dhorobha.
JJA: Chokwadi ndechekuti Ini handizive zvakanyanya mune izvo zvinhu. Kwemakore mazhinji ini ndakaburitsa mune mbiri dzimba dzekutsikisa dzeBasque, kunyanya muEREIN uye zvakare muTEREROA, kunyangwe mune ino zvakare zvishoma nezvishoma. Kubva panguva yavakandishivirira uye vachiramba vachivimba neni, ndinofanira kufunga kuti maonero akanaka.
Uye kutaura zvakanyanya, inoita kunge ichiburitswa yakawanda, iyo kwandiri ine zvirevo zvakanaka, kunyangwe ndichiwana fungidziro yekuti pane yekupedzisira havazi vese vanobvumirana neni. Uye, neruremekedzo rwakafanira, ndinofunga iyo ndiyo nzvimbo isiriyo, nekuti mhando kazhinji inouya kubva kuhuwandu.
JJA: Ini ndinofungidzira zvakangooma sekune vamwe vagari. Neraki, pakati pevanhu vari padyo neni, hapasati pave nematambudziko akakomba nekuda kwecovid, asi izvi hazvisati zvapera uye tinofanira kuramba tichichengetedza matanho, kunyangwe paine majekiseni zvinoita sekunge isu tave kutanga kusiya mugero.
Kana zviri zvekuchengeta chimwe chinhu chakanaka kunyora nyaya, nekuti zvino ndichairega ichipfuura, Ini handifarire kunyora nezve denda iri, kunyangwe iwe usingamboziva izvo zvichaitika mune ramangwana, saka ini handizvitonge pachena kana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » José Javier Abasolo. Kubvunzana nemunyori weiyo Original Version